Jabra Elite 85t, xagga sare ee tayada maqalka iyo joojinta buuqa | Wararka Gadget
Jabra Elite 85t, xagga sare ee tayada maqalka iyo joojinta buuqa
Miguel Hernández | | Afayeenada, General, Sawir iyo dhawaq, Reviews
Jabra waa shirkad maqal ah oo inala socotey alaabooyin baahiyaha oo dhan ah muddo dheer, waxaan kugula talineynaa inaad fiirsato dib u eegistayadii hore si aan fikrad uga helno. Markan waxaan la kulmi doonnaa mid ka mid ah wax soo saarka ugu qiimaha badan dhammaan waxyaabaha ay Jabra soo saartay ilaa maanta.
Jabra Elite 85t samaacadaha dhegaha ayaa istaagaya Apple iyo Sony beddelka iyada oo aan wax isku murugsan lahayn. Nagala soo baar Jabra Elite 85t falanqayntaan qotada dheer ee tayada maqalkooda iyo joojinta buuqa, ma tabaysaa? Xaqiiqdii maya.
1 Naqshadeynta iyo qalabka: Dareen ka badan bilicsanaanta
2 Isku xirnaanta iyo codsiga
3 Tayada maqalka
4 Joojinta buuqa iyo ismaamulka
Naqshadeynta iyo qalabka: Dareen ka badan bilicsanaanta
Jabra, in kasta oo ay u taagan tahay xoogga iyo tayada isu-geynta alaabteeda, maahan in ay had iyo jeer caan ku ahayd naqshad qurxin gaar ah. Dabeecadani waxay mar kale ka muuqataa Jabra Elite 85t, sameecadaha dhagaha ee ka fog inay noqdaan kuwa ugu bilicsanaanta suuqa. Guud ahaan waa kuwo aad u ballaaran oo qaro weyn, umana muuqdaan inay khaas ahaan iftiin yihiin. Xaaladdan oo kale, waxaan isku daynay daabacaadda oo isku daraysa codadka madow iyo naxaasta ah faahfaahinta ugu weyn. Si kastaba ha noqotee, wax walba waxaa lagu cabiraa Jabra.
Sameecadaha dhagaha: 23,2 x 18,6 x 16,2mm
Xaaladda: 64,8 x 41 x 28,2 mm
Sameecadaha dhagaha: 6,9 garaam midkiiba
Kiis: 43,7 garaam midkiiba
Naqshadeynta waxaa loogu talagalay inay ku habboon tahay dhegtayada oo aan ku nasanno. Guud ahaan, waxay ku qanacsan yihiin adeegsadayaasha aan "diidin" dhegaha dhagaha. Si kastaba ha noqotee, waa inaan qirto inaanan ku raaxeysanin gaar ahaan headphones-kan gaar ahaan, laakiin dhammaan kuwa ku jira qaabkan, oo aan si xun u saameyn doonin falanqayntayada sidoo kale. Sidan oo kale, marka la soo koobo, waxaan ku soo gabagabeyneynaa in Jabra Elite 85t aysan ahayn dhagaha dhagaha ee u iftiimin doona naqshadooda cajiibka ah, laakiin tayada dhismaha iyo ergonomics.
Isku xirnaanta iyo codsiga
Kuwaas Jabra Elite 85t - isku xirnaanta Bluetooth 5.0, taas oo naga caawin doonta sameynta xiriiro otomaatig ah otomaatig ah isla marka aan ka qaadno dacwada. Qeybtaan, howlgalka waa waxa laga filan karo shirkadda. Waxaan leenahay koodhka gudbinta SBC loogu talagalay muusigga qaab "caalamiyeysan" oo aan u gudubno AAC Apple ayaa iska leh marka aan isticmaalno Mac, iPhone ama iPad. Sidoo kale, sameecadaha dhagaha ayaa si ballaaran ula jaan qaada dhammaan noocyada qalabka.
App loogu talagalay macruufka> LINK
Appka Android> LINK
Codsiga, oo aan horey ugu tijaabinay dib u eegista kale, waa wax lagu daray. Via Jabra Sound +, oo loo heli karo labadaba macruufka iyo Android, waxaad awoodi doontaa inaad astaamiso waxyaabo badan oo ka mid ah sameecadaha dhagaha ee ka dhigi doona khibradaada mid dhameystiran Codsigani waa wehel dhammaystiran oo noo oggolaan doona inaan la qabsanno shan heer oo wax ku ool ah oo baajinta dhawaaqa, iyo sidoo kale MaqalkaTrhoug Si loo yareeyo buuqa dabaysha, dooro kaaliyaha codka, suurtagalnimada inaad ka raadsato dhagaha dhagaha iyo wixii ka sarreeya cusboonaysiinta ayaa laga heli karaa app (fiidiyowgeena waxaad ku arki kartaa ficil ahaan).
ka Jabra Elite 85t Iyagu waa shaqo si fiican loo qabtay marka la eego dhagaha dhagaha ee 'True Wireless' (TWS), halkaas oo aan ka helno aberrations dhab ah, mana aha sidaas falanqayntayada. Waxay ku sii jirtaa heer la mid ah kuwa kale ee kula tartamaya suuqa marka ay timaado kala duwanaanta qiimaha, dabcan, taasi waa tan ugu yar ee la filan karo.
Dhexdhexaad iyo sare: Waxaan helnay matalaad wanaagsan oo noocan ah mowjadaha, iyadoo awood u leh inaan midba midka kale beddelo, firfircoonaan iyo wixii ka sarreeya dhammaan daacadnimada marka la eego dhawaqa la sii daayay Codadkii heesaha ee tijaabooyinkeenii Artic Daanyeero iyo Boqoradda si sax ah ayaa loo soo saaray.
Hoose: Markay sidaas tahay, Jabra waxaa laga yaabaa inuu ahaa "ganacsi" xad dhaaf ah adoo siinaya basas si heer sare ah loo wanaajiyay, waa run inay aad ugu raaxaystaan ​​qaar ka mid ah muusigga ganacsi ee haatan socda, laakiin iyagu waxay aad u galaan maadooyinka markaan u leexanayno dhagaxa.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, dhibicdan aan kor kusoo xusnay ee baaska la xoojiyay waxaa looga gudbi karaa adoo hagaajinaya is barbardhiga codsiga. Way maqantahay laga yaabee inay doorteen codka wax aad u badan oo "dalbanaya" koodhka aptX.
Sida wicitaanada taleefanka, Sameecadaha dhagaha ayaa muujiyey horumar wanaagsan oo ku saabsan isdhaafsiga, waxaan xaqiijinay inaanan kaliya sifiican u maqlin, laakiin sidoo kale si cad noo maqlaan, inkasta oo ay jiraan xaalado dabayl iyo buuq dibadeed oo si heer sare ah loo xaliyay.
Joojinta buuqa iyo ismaamulka
Marka laga hadlayo baajinta dhawaaqa, waa in la ogaadaa in aan ka helay wax aad u wanaagsan lagana yaabo in aan dhex dhigno shanta shanqar ee ugu fiican ee qalabka 'Wireless True'. Qaabka maqalka Waxay buuxineysaa wixii loo baahnaa, in kasta oo ay run tahay inaysan gaarin heerka tartamayaasha ee leh qaabka "transparency" ee AirPods Pro-style, laakiin waxay ku xallisaa si la yaab leh. Isticmaal joogto ah, joojinta dhawaaqa ayaa ka badan inta ku filan oo ay fuliso ugu yaraan waxa ay ballan qaaddo.
Iyada oo Qi lacag la aanta lagaa qaadayo
Marka laga hadlayo madax-bannaanida, shirkaddu waxay noo ballanqaadaysaa in ka badan shan saacadood oo muusig loo maqlayo sii waday haddiiba aan leenahay joojinta buuqa markasta. Si kastaba ha noqotee, madax-bannaanida waxaa lagu qeexay wax intaa ka badan intaas, mugga aan ku soo saari doonno nuxurka ayaa ka dhigaya batarigan inuu kala duwanaan doono, xaqiiqduna waxay tahay in baaritaannadeennii aan ku helnay shantaas saacadood ee Jabra ballanqaaday. Si aan si buuxda ugu soo dalacno iyaga, waxaan u baahan doonaa ilaa laba haddii aan kaliya ku dhejisanno samaacadaha dhagaysiga kiiska, halka ku amraya dhamaan qalabka ay qaadanayaan 40 daqiiqo oo dheeri ah Dhinaca ugu dambeeya ee ismaamulka Jabra 85t waa wax soo saar ka badan intii ku filnaa.
Kuwani Jabra Elite 85t oo aad ka iibsan karto Amazon laga bilaabo 229 euro Waxay yihiin wax soo saar heer sare ah oo si toos ah u eegaya tartanka. Waxay keenaan wixii ay ballanqaadeen, shaki la'aan, laakiin wali waxay ka maqan yihiin kudhowaad inay yihiin badeecad si gaar ah u qurux badan, taas oo ka dhigaysa isticmaaleyaasha qaarkood inay dib uga fikiraan iibsigooda. Qiimuhu waa sarreeyaa, laakiin dhinaca kale, tayada codku aad iyo aad ayey u fiican tahay, iyo sidoo kale joojinta dhawaaqiisa.
Tayada muuqaalka cajiibka ah
Mid ka mid ah ANC ugu fiican suuqa
Naqshadeynta khatarta yar
Waxaan tabayaa taageero dheeri ah
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Jabra Elite 85t, xagga sare ee tayada maqalka iyo joojinta buuqa
Realme TechLife Robot Vacuum, a robot vacuum nadiifiye tayo sare leh / qiimo leh